Afaan - BBC News Afaan Oromoo
Afaan Chaayinaa 'YouTube' qofaan akkamin baruun danda'ama?
Afaan kana dura tasuma hin barre tokko 'YouTube' qofaan yeroo gabaabaatti baranii turjumaana tahuun ni dandahama jettanii yaadduu?
Barreessitoota guddina ogbarruu afaan Amaaraatiif gumaatan keessaa hedduun Afaan Oromoo fi Tigreen afaan kan hiikkatanidha. Kanaanis asoosamoota dheeraa, ogwalaloo fi tiyaatiroota hedduu keessatti maqaansaanii akka ka'u ta'uusaa oggeeyyiin damee kanaa dhugaa bahu.
Namni yoom dubbachuu eegale?
Dhalli namaa jalqabaa kan jireenyasaa adamoodhaan hoogganataa ture yoom dubbachuu akka eegale beektuu? Wayita sana dubbiin afaanii nama muraasa gidduutti ture amma garuu afaanonni kumaatamaan lakkaa'aman addunyaarratti uumamuu danda'aniiru. Kun attamiin ta'e?
BBC'n gara qe'ee Qe'ee Hiikaa Awaajii/Abbaa Gammachis keessatti dhalatan imaluun waa'ee maatii isaaniifi dhaloota isaanii iyyaafateera.
Korri hundeeffama akkaadamii Afaan Oromoo Yuunivarsiitii Wallaggaatti taa'amaa jira
Yunivarsiitiin Wallaggaa Akkaadamii Afaan Oromoo dagaagina afaanichaa irratti hojjetu kan jalqabaati jedhe hundeessuufi.
Afaan Oromoo: Arrab-martuu Afaan Oromoo hagam beektu?
Kurupheen buqqee baattee, burqaa utaalte irra deddeebiin ariitiin jedhaa mee.
Iizii Muulensi: Shamarree Ameerikaa baadiyyaa Jimmaa manashee godhatte
Iizii Muulensi jedhamti. Hojii tola-ooltummaadhaaf karaa Piiskoorpsiin kan Ameerikaa irraa dhufte. Godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kossaa ganda Ciimmee jedhantu keessa waggaa tokkoof jiraatteetti.
Qondaalli Biiroo Barnoota Oromiyaa akka jedhanitti manneen barnootaa 20 keessatti barattoonni Afaan dhaloota isaaniin ni baratu.
27 Fuulbaana 2018
Afaan Oromoo hundee bal'aa qaba. Afoolaanis badhaaadhaadha. Afaan Oromoon dubbisuufi barreessuunoo? Itti gaafatamummaa Afaan Oromoo eenyurra jira? Ogeessonni kan jedhan qabu.
Afaan: Naayijeeriyaatti Saba dhiiraafi dubartiif afaan addatti qaban
Saba Naayijeeriyaa Ubaangi jedhaman keessatti dhiiroonniif dubartoonni afaan garagaraa haasa'u
Yunvarsitiin Baahir daar bara dhufurraa eegalee Afaan Oromoo barnoota idileetiin digrii jalqabaatiin barsiisuufi akkasumas afaan Gi'iizii ammoo eegaluuf qophii xumuruusaa beeksiseera.
Afaan barachuuf umurii murteessaan jira jedha qorannoon
Afaan sirriitti barachuuf umurii murteessaan jiraachuu saayinisiin ifa taasisee.
Dhalataan lammii Faransaay Leyoonaar akka lammii Itophiyaatti ofiisaa lakkaa'a. Mirrii kunis attamiin akka isatti umamee nutti himeera.
Baadeeshi: Afaan 'badaa' jiru kana namoota sadii qofatu dubbataa jira.
Baadiyaa Kaaba Paaksitiaan keesstti jaarsoliin sadi dubbattoota afaan Baadeeshi isaan dhumaa ta'uuf deemu.
Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'uun isaa uummata Oromoo qofa osoo hintaane, guutuu biyyaatiif faayidaa guddaa qaba jedhu hayyoonni.
Barsiisaa Tafarraa Ta'eeraan Finfinnee keessatti Afaan Oromoo barsiisuuf guddaa dhama'an. Turtii keessa garuu jijjiirama arganiin haalaan boonu. Amma afaan keenya sukkaara taate jedhu.
Nama Afaan Oromoo waggoota 25'f barsiisaa turaniin wal baraa